SingForYou.net - Chit Thu Hnin See
Chit Thu Hnin See
By : sithunaung on May 26, 2010
Score: 145 Rating: 5.00 Comments: 56
Chit Thu Hnin See's Description
~"ကိုယ်မျက်ကွယ်ပြုချိန်ထိအောင်မင်းကိုချစ်နေမယ်~~ဘဝတွေပျက်ပစေ~ အသဲကြွေပျက်ပစေမပြောင်းလဲဘူးယုံကွယ်~~နှုတ်ခမ်းနီလေးကိုစွဲလန်းလို့နေတယ်~ နှုတ်ခန်းနီလေးကိုသိပ်ချစ်မိနေတယ်"~~~THANK U ALL :))
moeluu on May 28, 2010 0
Nice one!.. ko)sithu, it's good to listen too.. all*&cheers!
turikimuriki on May 27, 2010 0
အရမ်းကောင်းပါတယ် … broအားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ရှင် *****
sithunaung on May 27, 2010 0
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis turikimuriki ရေ..:))
gracelad on May 27, 2010 0
မျက်ကွယ်ပြုချိန်ထိအောင် ချစ်နေမယ်ပေါ့လေ....ကြောက်တယ် ဘ၀ခြားသွားပြီလေ )) ဟီးဟီး စတာပါ။ဆိုထားတာအရမ်းကောင်းတယ်။အစဉ်အားပေးနားဆင်နေတယ်နော် ကိုစည်သူ................
ha ha :) ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis gracelad ရေ..:))
Zarmaung on May 27, 2010 0
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro zarmaung ရေ..:))
chitmoe2009 on May 27, 2010 0
kg lite tar ko sithu yay…..arr pay nar sin thwar par tal nor..5********
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis chitmoe ရေ..:))
aprilsea4 on May 27, 2010 0
bro sithunaung...arr pay twr tal ..xo twr tal lal ar yann kg tal nor..*****
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis aprilsea ရေ..:))
Thanzinchitthu on May 27, 2010 0
ဟဟဟ..vote လို့မရလို့အဖြေရှာလိုက်တော့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အကောင့်နဲ့ အဆောင်က friend တစ်ယောက် က၀င် vote သွားတာကိုး...ဒီသီချင်းလေးကိုသိပ်မကြားဖူးပေ မယ် bro အဆိုကောင်းတော့ ကြိုက်တောင်ကြိုက်သွားပြီဗျာ.. ရေလည်လန်းတယ်..5****************for bro.
ဟား~ဟား~ဒူလေးတုန်း~~:P~ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro thanzin ရေ..:))
pp01 on May 27, 2010 0
eel..tal so tae sar par lar! ba yar thar yae...clean and neat vocal..great:D*****
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis pp ရေ..:))
paradise on May 27, 2010 0
စာသားလေးတွေကလည်း နုရွလှပ...ဆိုထားတာလေးကလည်း....နူးနူးညံ.ညံ.လေးပါလား......အရမ်းကောင်းတယ် Brother ~~
နုပစ်လိုက်တာပေါ့~~းD~ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis paradise :)
naymin15 on May 27, 2010 0
bro ရေဆိုလိုက်တိုင်းးကောင်းးမြဲကောင်းဆဲပဲဗျ..အား ပေးနားဆင်သွားပါတယ်....********:)
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro konaymin ရေ..:))
hippo on May 27, 2010 0
အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ် bro sithunaung ရေ ... ***** :D
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis hippo ရေ..:))
yinmin on May 27, 2010 0
ဟုတ်တယ်အရင်ကတည်းကကြိုက်တဲ့သီချင်းပါ~ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis yinmin ရေ..:))
sumyar on May 27, 2010 0
bro yay arr pay nar sin twar par tal..d song lay ko khu mha kyar fuu tal..heehee kg tal bro yay so twar...
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis sumyar ရေ..:))
jpkglay on May 27, 2010 0
မနားထောင်ဖူးဘူး.. ဒီသီချင်းကို.... ခုပထမဆုံးပဲ.. သတိထားနားစိုက် နားထောင်သွားပါတယ်.. ကိုစည်သူကြီး
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဘရိုဂျပန်လေး ရေ..:))
Rosies on May 27, 2010 0
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis rosies ရေ..:))
aungtun1 on May 27, 2010 0
Great version bro sithu yay,,,, really neat vocal*************************
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုအောင်ထွန်း ရေ..:))
songlover015 on May 27, 2010 0
sithu ရေ - အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်...အရမ်းကောင်းပါတယ်~~ ((နှုတ်ခမ်းနီကြိုက်တတ်မှန်းခုမှသိ တွားဘီ-ဘာ ဘရမ်း သုံးတာလဲ )) !5*voted!
koneek on May 27, 2010 0
thz alot friend :)
susu23 on May 27, 2010 0
likt it nice to sing bro sithu yay arr pay nar sin thwar tel naw**********4u....:))))))))
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis susu ရေ..:))
ayoelay on May 27, 2010 0
Really Nice with your Vocal ..BR. Sithu! *****StArs!
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro ayoelay ရေ..:))
maung309 on May 27, 2010 0
very nice song .. nice meaning and nice singing par Ko Sithu yay.... ****************4U.. (I noticed thatacouple of ladies are wondering if your girl's name is Rose and what kinda hnoke khan nee that you are in love with... lol) ~~ uncle maung ..
ဟား~ဟား~ဟုတ်တယ်ဗျိုး~နှင်းဆီတော့ဝမ်းသားမလားမသိဘူး~ ကျနော်ကိုတော့ဘာတံစိပ်သုံးလဲတဲ့လာမေးနေကုန်ကြပြီ~ တော်တော်ဆိုးတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေ~အဟား~ဟား~ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် uncle maung ရေ..:))
missasean on May 27, 2010 0
kg ei kg ei taw...ahote amhan ayekan kg ei :P *********
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် my sister lay ရေ..:)
snowgirl on May 27, 2010 0
chit thu hnin see so par lar :D chit thu name ka hnin see lar :P bro gyii yay cha noe gal lay arr pay nar sin thwar par dal shin, susan pyaw tha lo pal, bar na khan nee lal? ha ha ;clap; ;clap; very good par pal *******
i used ChapStick brand :P~~ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis snowgirl ရေ..:)
dimpleminle on May 27, 2010 0
ဆိုသွားတာကောင်းလိုက်တာ..bro sithu ရေ.... အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်....5*******************
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis dimpleminle ရေ..~~း)
susannyunn on May 27, 2010 0
နှုတ်ခမ်းနီအကြောင်းဆွေးနွေးရအောင်လေ :mm :mm :yahoo စူစန်ကဝါတနာပါတယ် :yes >>> ပါ BRAND လဲအေ ??? ဟီးဟီးဟီးးးး SHISEIDO လား? KANEBO လား? REVELON လား? LOREAL' လား?????? အဟတ်ဟတ်ဟတ်:))))))) ဂလိုတာဆိုဘရိုဂျီးတော့ ဒွတ်ခရောက်ပြီ ဟီးဟီး ဪ........ စွဲလမ်းမှူပြဿနာတေဖစ်နေရှာတာကိုးး;းး;း :?:? တနားစာဂျည်းတော် ဂယ်ပဲ အဟားဟားဟားးးးး :))))))))) မာမီးခေါက်ဆွဲပါပဲချင့် MILLION******* ဘရိုဂျီး C2 ဂျီး ရေ >>>>>>>>>>:P
~အင်းမစူစန်ပြောမှနှုတ်ခမ်းနီဋီကာဖွင့်ရမယ်ပုံဖြစ်ကုန်ပါပြီ~ အဲဒီ SHISEIDO ,KANEBO ,REVELON တွေမသိဘူးဟေ့~:P~နှုတ်ခန်းနီဆိုးထားတဲ့နှုတ်ခမ်းလေး ကိုစွဲလန်းနေတာကိုပြောတာ~:D~ အင်းကလေးတွေကိုသွားပြောလဲဘာမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူး~ မောတယ်~လက်ညောင်းတယ်~အဟား~:P:D~နားဆင်အားပေးသွားတဲ့ sis g S1 ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်~~း)
BrownLay on May 27, 2010 0
A lon kg thaw tha chin lay nae.alon kg thaw aso par bro sithu.. arr pay nar sin thwar par dal nawt.. *************s for you!
soramoe on May 27, 2010 0
di thi.chin lay ma kyarr mi tar kyar pyi.... your singing is good as always BroSithu ~ nar htaung ya tarayann kg tal
whitekisslay on May 27, 2010 0
Achit kyii tae bro g atwat....Million stars **************par shint:))bravoooooo bro g sithu...:atb:palzz sannmya narr sinn twer par p norrtt>>>>>>>>
Feedback : 56
Feedback : 2
Feedback : 23